မိုးဖွဲလေးအောက်မှာ ယိမ်းနွဲ့လှုပ်ခါနေကြသော သစ်ရွက်စိုစိုစိမ်းစိမ်းတွေကြားက မွှေးမြကြိုင်အီနေသော အပွင့်ဖြူဖြူများ . . .။
သည်နေ့ခြံထဲမှ ကျွန်တော့်ယုဇနပင်လေး အပွင့်စပွင့်သည်။ ကျွန်တော့်ယုဇနပင်လေးလို့ ပြောရသည်မှာ အကြောင်းရှိပါသည်။ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ တစ်ခါမှ သစ်ပင်မစိုက်ဖူးခဲ့ပါ။ သစ်ပင်စိုက်ခြင်းကိုလည်း ၀ါသနာမပါခဲ့ပါ။ သို့သော် ယုဇနဆိုသော ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို စတင်ချစ်မိသွားသော အချိန်မှာတော့ ပထမဆုံးအနေဖြင့် သစ်ပင်တစ်ပင်စိုက်ပျိုးရန် စိတ်ကူးမိပါသည်။ ထိုအပင်က ယုဇန . . . ။
ယုကိုချစ်၍ ကျွန်တော် ယုဇနပင်လေးတစ်ပင်ပျိုးခဲ့သည်။
ကျွန်တော်နှင့်ယုဇန ချစ်သူဖြစ်သွားကြပြီး သက်တမ်းတစ်လအကြာမှာ ကျွန်တော့်အချစ်သစ်ပင်လေးအကြောင်း သိသွားသောယုက ဤသို့မှတ်ချက်ချခဲ့ဖူးသည်။ ဟုတ်တာပေါ့။ တစ်နှစ်တိတိအသည်းအသန်လိုက်ထားရတဲ့ ယုဆိုတဲ့ကောင်မလေးကို ကျွန်တော်ရူးရူးမူးမူး ချစ်ခဲ့တာပေါ့ ။
ယုမျက်နှာစူပုတ်ပုတ်လေးကို အမြဲတမ်းငေးကြည့်နေရင်းမှပင် ဘယ်တော့မှကြည့်မ၀၊ ချစ်မ၀ခဲ့။ ယုမျက်စောင်း လှလှလေးအောက်မှာ ပြာဖြစ်ချင်ဖြစ်စေ။ ပေကပ်နေချင်သည်။ ပြီးတော့ ယုဘယ်လို စိတ်ကောက်ကောက် ၊ ယုဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး ခါးစည်းခံချင်မိသည်။ ယုတစ်ယောက်ကတော့ ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော့်လိုချစ်သော်လည်း ကျွန်တော့်လောက် လှစ်မပြ။ မာနကြီးပြီး ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို နိုင်စားလိုသူလေးဖြစ်သည်။
ရည်းစားရှိမှန်းသိသိနဲ့တောင် သူ့ဘေးမှာယောက်ျားလေးတွေ ၀ိုင်းနေတာကို ဂုဏ်ယူချင်သည်။ သူ့ကို ပန်လိုသူတွေပေါများတာကို မာန်မာနတက်ကြွချင်သည်။ ယုမှတစ်ပါး အခြားမရှိသည့် ကျွန်တော့်အားနည်းချက်ကို ကောင်းကောင်းကြီးသိထားသူအဖြစ် အမြဲတမ်း အထက်စီးက ဆက်ဆံချင်သည်။
ကျွန်တော့်နှလုံးသားတည့်တည့်မှာ ယုပစ်လွှတ်သမျှ မြားအစင်း ရာ၊ ထောင်တို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် တပ်ဆင်ထားသော အချစ်ဒိုင်းကြီးက “ခွင့်လွှတ်….. ခွင့်လွှတ်” ဟု အသံမြည်လျက် ကြံ့ကြံ့ခံနေဆဲ။
ယုသည် အတော်ဆိုးသည့် ကောင်မလေးမို့လို့ပဲ ကျွန်တော်ကချစ်မိလေသလား။ ကျွန်တော်က သိပ်ချစ်လွန်းလို့ပဲ ယုသိပ်ဆိုးလေသလား။ ခွဲခြားမသိတော့ပါ။ ယုကသာ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေသော ကိုစွန်ညိုတို့နှင့် တစ်ခါတစ်ရံ စကားပြောချင်ပြောမည် ၊ ရယ်ပွဲဖွဲ့ချင်ဖွဲ့မည်။ ကျွန်တော့်ကိုတော့ မည်သည့်မိန်းကလေးနှင့်မျှ မခင်ရ ၊ မရောရ ၊ စကားမပြောရဟု တစ်ချက်လွှတ်အမိန့် ထုတ်ပြန်ထား၏။ ယုတစ်ယောက်ရှိလျှင်ပဲ အရာရာပြီးပြည့်စုံနေသော ကျွန်တော့အဖို့တော့ သည်အမိန့်တွေက ပြင်းစရာတောင်ကောင်းနေသလိုပင်။
“ဖြိုးနော်…….ငါဘာလုပ်လုပ် နင်လိုက်မလုပ်ရဘူး။ ငါက နင့်ကိုသိပ်ချစ်တာ။ နင့်အနားမှာ ငါကလွဲပြီး အမဆိုလို့ ယင်မတို့ ၊ ခြင်မတို့သန်းတာတောင် ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး သိလား”
သူမ ကျွန်တော့်ကို ဤသို့ချုပ်ချယ်လွှမ်းမိုးတာကိုပဲ ကျေနပ်ကြည်နူးခဲ့ရသည်မှာ ကျွန်တော်ပင်။ တစ်ခါလည်း လမ်းထဲက အမေ့ ဘော်ဒါ ကောင်မလေးနှင့် ကျောင်းထဲမှာ မတော်တဆဆုံမိကြ၍ ပြုံးပြနှုတ်ဆက်မိသည်ကို “ဘယ်သူလဲ” ၊ “ဘယ်ကလဲ” ၊ “ဘာလို့သွားပြုံးပြရတာလဲ” စသည့်မေးခွန်းပေါင်းများစွာနှင့် အကြီးအကျယ်ပြသနာရှာပြီး ၃ရက်တိတိ စိတ်ကောက်ခဲ့ဖူးသည်။ ကျွန်တော့်မှ ရှင်း၍မဆုံးတော့။ နောက်ဆို အဲ့ဒီ့အသိကောင်မလေးကိုတွေ့ရင် ကြိုတင်မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ထားရ၏။ ယုကဤသို့ဤနှယ် သ၀န်တိုတတ်သူ။
သည်တစ်ခါ ယုစိတ်ကောက်တာတော့ အတော်လေးကြာသွားပြီ။ ဒီနေ့ဆို တစ်ပတ်တိတိပြည့်ပြီဖြစ်သည်။ ကျောင်းကားပေါ်မှာ ယုနှင့်ထိုင်ခွင့်မရသည်မှာလည်း တစ်ပတ်ပြည့်ခဲ့ပြီ။ ယုစိတ်ကောက်တာကို သည့်ထက်ပို၍ သည်းမခံနိုင်တော့။ ယုနှင့်စကားပြောခွင့်မရဘဲ ခြောက်သွေ့တိတ်ဆိတ်စွာ ကုန်ဆုံးရသည့်နေ့ရက်များကို ကျွန်တော် ခံနိုင်ရည်မရှိတော့ပါ။ သည်နေ့ယု စိတ်ကောက်ပြေမှ ဖြစ်မည်။
သည်တစ်ခါ ယုကျွန်တော့်ကို စိတ်ကောက်ရသည့် အကြောင်းအရင်းကလည်း အတော်လေးခိုင်လုံပါသည်။ အဲသည်နေ့က ယုရှေ့မှာ တစ်ခါပြုံးပြမိ၍ ပြဿနာတတ်ဖူးသော၊ ယုအတော်လေး မုန်းတီးကြည့်မရသော တစ်လမ်းတည်းနေ ကောင်မလေးက ကျောင်းကန်တင်းရှေ့မှာ ဖိနပ်ပြတ်သွားသည်။ ကံဆိုးလှသော ကျွန်တော်က သူမရှေ့မှ ဖြတ်သွားမိလျက်သား။
သူမ ၀မ်းသာသွားချိန်မှာ ကျွန်တော် အတော်လေးထိတ်လန့်နေပြီ။ ယုမကြိုက်တာကို ရိပ်မိပုံရလျက်နှင့် ကျွန်တော့်ကိုတွေ့တိုင်း ၀မ်းသာလှိုက်လှဲ လာလာနှုတ်ဆက်တတ်သော သူမကြောင့်ပင် ကျွန်တော့်ရှေ့ရေးက ရင်လေးဖွယ်ရာ။
“ငါ့ကို ကူညီပါဟယ်။ ငါ့ဖိနပ်လေး ပြတ်သွားလို့။ အဲဒါ ဆက်လျှောက်ရအခက် ၊ ရပ်နေရ အခက်ဖြစ်နေတာ ကောင်လေးတွေလည်း ၀ိုင်းစနေပြီ။ ငါရှက်လို့သေတော့မယ်။ ငါ့ကို ကူညီပါနော်”
ကျွန်တော် အလွန်စိတ်ညစ်ညူးစွာပင် ခေါင်းကုတ်မိလေပြီ။
“ငါက ဘယ်လို ကူညီရမှာလဲ”
ကျွန်တော့် ဖိနပ်ချွတ်ပေးရမှာလား။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သူက ယုမှမဟုတ်တာ။
“ဟို…..ဒီလိုလေ…………အားတော့နာပေမဲ့ မရိုမသေဟာ ငါ့ဖိနပ်လေးကိုကြည့်သွားပြီး ရှေ့နားကစတိုးဆိုင်မှာ မှန်းပြီး တစ်ရံလောက် ပြေးဝယ်ပေးပါလား။ ရော့……….ပိုက်ဆံယူသွားနော်…………မြန်မြန်လေး”
မျက်စိထဲမှာ ယုကိုပြေးမြင်မိရင်း ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းမသိ ။ မကူညီရင်လည်း လူစိတ်မရှိရာကျမည်။ ကူညီပြန်ရင်လည်း ယု အမျက်တော်ရှမည်။
“လုပ်ပါဟယ်……..ငါ ပရက်တီကယ် အချိန်အရမ်းနီးနေလို့ပါ”
ကျွန်တော် မတတ်သာတော့ပါ။ ထိုကောင်မလေးက ကျွန်တော့်အမေ ဈေးကြုံမှာတိုင်း မညည်းမညူ ၀ယ်လာပို့တတ်သူ။ အမေ့ကိစ္စတွေကို အမြဲကူညီတတ်ပြီး အိမ်ကို မကြာခဏ ၀င်ထွက်ရင်းနှီးနေသော အမေ့အချစ်တော်။
“ဖြိုးအမေက ဘာလို့သူ့ကိုချစ်ရတာလဲ” ဟု ဒေါသတကြီး ယုအော်ဟစ်ခဲ့တုန်းက ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှန်းမသိအောင် ကျွန်တော့်ကို အာရုံနောက်စေခဲ့သော ကောင်မလေး။
ယုမမြင်လောက်ပါဘူးဟု ရဲဆေးတင်လျက် သူမအား ဖိနပ်တစ်ရံ ပြေးဝယ်ပေးလိုက်ရသည်။ ကံကြမ္မာက ကျွန်တော့်ဘက်မှာ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပါသည်။ ဖိနပ်ကို သူမလက်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်ချိန်တည့်တည့်တွင်မှ ယုက ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ ဘွားကနဲ ပေါ်လာ၏။ အဏုမြူဗုံးဆယ်လုံးလောက် ဆင့်ပြီးပေါက်ကွဲသွားသလို ကျွန်တော့်ရင် တစ်ပြင်လုံး ၀ုန်းဒိုင်းကြဲသွားတော့သည်
ယုကို ဘာပြောလို့ ပြောရမှန်းမသိတော့။ ထူးဆန်းတာက ယုသည်ကျွန်တော့်ကို အရင်လို ဒေါသတကြီး ပြသနာမရှာ ၊ ဆူဆူညံညံရန်မလုပ်။ ကျွန်တော်နှင့်သူမအား ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်၏။
ရွံမုန်းခြင်း၊ စက်ဆုပ်ခြင်း၊ အော့နှလုံးနာခြင်းတို့ ပေါင်းစည်းထားသော အကြည့်။ တရားခံတွေ ကိုကြည့်သလိုအကြည့်။ ကျွန်တော့်ကို ခံရအခက်ဆုံးဖြစ်စေသောအကြည့်။
ထို့နောက် ဘာမှမပြောဘဲ ယုချာကနဲ လှည့်ထွက်သွားသောအခါ ကျွန်တော်အတော်လေး နာကျင်ဝမ်းနည်းသွားရသည်။
ကျွန်တော်ပြေးလိုက်သွားပြီး အမျိုးမျိုးရှင်းပြပါသော်လည်း ယုကလုံးဝလှည့်မကြည့်တော့ပါ။ နောက်နေ့များမှာလည်း ဘယ်လိုမှချော့မရ။ နေ့နေ့ညည ကျွန်တော်ကြိုးပမ်း သမျှတိုင်းသည် အရာမထင်ခဲ့။
“နင့်မျက်နှာကို ငါ့ရှေ့မှာ နောက်ထပ်မတွေ့ချင်ဘူးနော် ။ နင်ပါရင် ကျောင်းကားတောင် ငါလိုက်မစီးတော့ဘူးမှတ်”
ယုကစိတ်တိုနေသည့် အချိန်တွင်ဘာပြောပြော နားမ၀င်တော့ သည့်အကျင့်ကို ကျွန်တော်သိသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်ပဲ အနစ်အနာခံပြီး လိုင်းကားခဏ ပြောင်းစီးပေးလိုက်ပါသည်။ နို့မို့ဆို ကျွန်တော့်ကြောင့် ယုလိုင်းကားစီးရမည်ကို မလိုလားပါ။
ကျောင်းကားပေါ်မှာ အတူတူထိုင်ရင်း စကားတွတ်ထိုးခဲ့ကြသည်။ ရယ်မောကြည်နူးခဲ့ကြသည့် အချိန်လေးများအကြောင်းပြန်တွေးရင်း လိုင်းကားပေါ်မှာတစ်ယောက်တည်း မျက်ရည်ဝဲမိသည့် အဖြစ်ကို ယုတစ်ယောက်မသိ။ ယုနှင့်ပတ်သတ်လျှင် ကျွန်တော်သည် အရာရာကို ခံနိုင်ရည်နည်းခဲ့လေသည်။
“ယုဇန ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုချစ်လို့ ယုဇနပန်းလေးတွေကို စိတ်ဝင်တစား မြတ်နိုးတတ်လာတာ။ လက်ဖက်စားရင်လည်း ယုဇန လက်ဖက်ပဲစားဖြစ်တော့တယ်။ ဈေးဝယ်ရင်လည်း ယုဇနပလာဇာတို့ ယုဇနစင်တာတို့မှာပဲ ၀ယ်တော့တယ်။ ယုနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ရင်တောင် ယုဇနဂါးဒင်းမှာ ဆောင်ရင်ကောင်းမလားလို့”
ကျွန်တော် အဲ့လိုစနောက်တိုင်း ရယ်မော မဲ့ရွဲ့ပြီး စိတ်ဆိုးပြေခဲ့ဖူးသော ယုတစ်ယောက် သည်တစ်ခါတော့ အတွေ့ပင်မခံတော့တာ တစ်ပတ်ရှိပြီ။ ကျွန်တော့်ပြစ်မှုကလည်း ကြီးခဲ့သည်လေ။ ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော် ကျောင်းကားလိုက်စီးတော့မည်။ ကျောင်းကားပေါ်မှာ ယုစိတ်ကောက်မပြေပြေအောင် ချော့မော့ရမည်။ ယုအော်ထုတ်လည်း ကျွန်တော်ခံမည်။ ယုရိုက်ထုတ်လည်းကျွန်တော်ခံမည်။ ပြီးတော့ ဒီနေ့ ကျွန်တော့် ယုဇနပင်လေးမှ ပထမဆုံးစပွင့်သည့်ပွင့်ဦးတို့ကို ယုအားဆက်သချင်ပါသည်။
ပန်းပွင့်လေးများကို နမ်းရှိုက်မွှေးကြူ၍ ပြုံးသွားမည့် ယုမျက်နှာလှလှလေးကို ကြိုတင်မြင်ယောင်ရင်း အလွမ်းစိတ်တို့ပင် ပိုမိုသိပ်သည်းလာသလို။
ယုဇနပန်းခက်လေးတွေ ရင်မှာအပ်၍ လမ်းထိပ်မှာရပ်၍ ကျောင်းကားအလာကို မျှော်ရသည်မှာ မောနေ၏။
ကျောင်းကား ကျွန်တော့်ရှေ့သို့ ထိုးရပ်ပေးလိုက်သော အချိန်တွင် ရင်ထဲဒိန်းခနဲ တစ်ချက်ဆောင့်ခုန်သွားသည်။ ယုနှင့်တွေ့ရတော့မည်။ ကားပေါ်သို့ လှမ်းတက်လိုက်သော ခြေလှမ်းများက တုန်ယင်နေ၏။ ယုကမျက်စောင်းလေးထိုး၍ ကျွန်တော့် အချော့ကိုစောင့်နေမည်လား။ ဒါမှမဟုတ် မျက်နှာထားတင်းတင်းနှင့် မတူမတန် သလို ဆက်ဆံဦးမည်လား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ယုအနားမှာ ထိုင်ခွင့်ရဖို့သာ အရေးကြီးပါသည်။
အတွေးများစွာ ထွေပြားရင်း ယုထိုင်နေကျ နောက်ဆုံးပြတင်းပေါက်ဘေးခုံလေးဆီ ခပ်သွက်သွက် လျှောက်လှမ်းမီစဉ် ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ဟာခနဲ လေပူတစ်ချက်တိုက်ခတ်သွား၏၊ ကျောင်းကားပေါ်မှာ ယုပါမလာပါလား။
“ယု ဒီနေ့ကျောင်း မတက်ဘူးလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲ……..နေမကောင်းလို့လား”
ယု သူငယ်ချင်း မေသူ့ကို အမောတကော မေးမိသည်။ မေသူ့ မျက်နှာက သိပ်မကောင်းလှ။
“ယု ကျောင်းကားမစီးတာ သုံးရက်ရှိပြီ”
မေသူ ကကျွန်တော့် အမေးကို ဖြေသင့် ၊ မဖြေသင့် တွေဝေနေသည်။
“ပြောပြပါဟာ……… ယု ဘာဖြစ်လို့လဲ”
“ဟို……ဟို……ယုကို….ဇေယျက ကားနဲ့လာလာကြိုလို့ လိုက်သွားတယ်”
ကျွန်တော့်ခေါင်းကို ကျဉ်စက်နှင့် တို့လိုက်သလို ဇေယျဆိုတာ ကျွန်တော်ရှိမှန်းသိသိကြီးနှင့် ယု ကို ကြောင်တောင်နှိုက်ချင်နေသော နောက်ဆုံးနှစ်ကကောင်။ သည်ကောင် ပွဲလန့်တုန်းဖျာခင်းပြီး ယု ကို အပိုင်စီးဖို့ ကြိုးစားနေပြီလား။
ကျွန်တော့် တောက်ခေါက်သံကြောင့် မေသူလန့်သွားပြီး တစ်ကားလုံး ၀ိုင်းလှည့်ကြည့်ကြသည်။ ဒေါသခိုးများက ကျွန်တော့် တစ်ကိုယ်လုံးမွှန်ထူလာသည်။ တကယ်ဆို ယုအဲဒီ့လောက် မရက်မစက်သင့်ဘူး။ ဒါ ကျွန်တော့်ရင် ကို ယု သက်သက်ခြေမွနေတာ။ ယုကိုသိပ်ချစ်မှန်း ယုသိလို့။
မေသူလက်ညှိုးညွှန်ရာသို့ ကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းကားဘေးကို ယှဉ်မောင်းလာသော နက်ပြာရောင်ဆလွန်းကားလေးထဲမှာ ဇေယျဆိုသူနှင့် ရယ်မောကြည်နူးပြနေသော ကျွန်တော့်ရဲ့ယု။
တစ်ကိုယ်လုံးပူထူပြီး ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိခင်မှာပင် စက်ရှိန်မသေ သေးသောကားပေါ်မှ ခုန်ဆင်းမိလျက်သား။
တစ်ကားလုံး၏ အော်ဟစ်သတိပေးသံများ အဆုံးတွင် air-con ကားကြီးတစ်စီးအား အရှိန်ပြင်းစွာ မြင်တွေ့လိုက်ရသည်။
ကျွန်တော့်အော်သံနှင့်အတူ ကျွန်တော့်အာရုံများ ရုတ်တရက် မှောင်မိုက်ပျောက်ဆုံးသွား၏။
မိုးဖွဲဖွဲလေးအောက်မှာ ယိမ်းနွဲ့လှုပ်ခါနေကြသော သစ်ရွက်စိုစိုစိမ်းစိမ်းတွေကြားက မွှေးမြဆွတ်အီနေသော အပွင့်ဖြူဖြူများ . . .။
အပြာရောင်အုတ်ဂူလေး နံဘေးရှိ စွတ်စိုသော မြေပြင်ပေါ်တွင် ယုဇနပွင့်များ ကျဲပြန့်ကြွေလွင့်နေကြသည်။
“ငါ့ကို ခွင့်လွှတ်ပါဖြိုး။ အချစ်ကြီးလို့ အမျက်ကြီးတတ်တဲ့ ငါ့ကို၊ အရွဲ့တိုက်ပြီး လက်စားချေတတ်တဲ့ ငါ့ကို နင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါဟာ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလောကကြီးမှာ ငါအချစ်ဆုံးချစ်သူကတော့ နင်တစ်ယောက်တည်းဆိုတာတော့ နင်မမေ့လိုက်ပါနဲ့။ နင့်ခေါင်းရင်းမှာ ငါစိုက်ပေးခဲ့တဲ့ နင်မြတ်နိုးဖူးတဲ့ ယုဇနပင်လေး ဒီနေ့ပွင့်ပြီသိလား။နင့်အနားမှာ ငါအမြဲရှိစေချင်ခဲ့တာပါ ဖြိုးရာ။ ငါကလွဲပြီး နင့်အနားမှာ ဘယ်သူမှမရှိစေချင်ခဲ့တဲ့ ငါ့ရဲ့အတ္တဆူးတွေက နင့်ကိုသတ်ခဲ့ပေမဲ့ နင့်ကိုတစ်နေ့မှ မေ့လို့မရဘူးဟ။ နင့်ခွင့်ပြုပေးပါ….နင့်ဆီ ငါနေ့တိုင်းလာတွေ့ပါရစေ။ ငါ့ကို မမုန်းလိုက် ၊ မမေ့လိုက်ပါနဲ့နော်”
ကောင်မလေး၏ မျက်ရည်များ မိုးနှင့်အတူ ရောထွေးသွား၏။ ထို့နောက် ကောင်မလေး တရွေ့ရွေ့ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားသောအခါ နောက်ထပ်ပုံရိပ်တစ်ခုက အုတ်ဂူလေးအနီးသို့ တိုးကပ်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
“ငါ့ကိုခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့ ဖြိုးကျော်။ နင့်ကို တစ်ဖက်သတ်ချစ်မိလို့ နင့်အမေနဲ့တည့်အောင်ပေါင်းပြီး သဘောကောင်း ချင်ယောင်ဟန်ဆောင်ခဲ့တဲ့ငါ ၊ နင့်ရည်းစား နင့်ကိုသ၀န်တိုတတ်မှန်းသိလို့ တမင်အထင်လွဲပြီး နင်တို့မကွဲကွဲအောင် လုပ်ကြံမိခဲ့တဲ့ငါ ၊ နင့်ကွယ်ရာမှာ နင်နဲ့ငါရပ်ကွက်ထဲမှာ ဘာညာဘာညာလိုလို နင့်ရည်းစားနားပေါက်အောင် ကောလဟာလ အရင်လွှင့်ပြီးမှ အဲဒီနေ့ပြကွက်ကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ငါ။ ခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့ဟာ ၊ နင့်ကိုပေးမိတဲ့ ဒဏ်ရာကသိပ်ကြီးလွန်းနေလို့ ငါ့ကိုငါတောင် ဘယ်တော့မှ ခွင့်မလွှတ်ဘူး။ နင်ငါ့ကို နာနာကြည်းကြည်းနဲ့ပဲ မေ့ဖျောက်ပစ်လိုက်ပါနော်”
သူမ၏ မျက်ရည်များက စိုစွတ်သော အုတ်ဂူထဲ တစ်ပေါက်ချင်း စိမ့်ဝင်စီးဆင်းသွား၏။
မိုးရေများအောက်မှာ ဦးတည်ရာချင်းခြားနားစွာ ကျောခိုင်းလှည့်ပြန်သွားကြသော မိန်းကလေးနှစ်ဦး၏ နှလုံးသားနှစ်စုံသည် အပြာရောင်အုတ်ဂူလေးပေါ်တွင် တစ်ခုတည်းအဖြစ် ထပ်တူကျသွားလေသည် ။ ။
အွန်လိုင်းမှတဆင့် ဆံပင်ဖန်တီးမှုပုံစံအများအပြားကို လေ့လာနိုင်စေမည့် ဆိုက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်အတွင်း ထူးခြားဆန်းပြားလှသော ဆံပင်ပုံစံများကို ဖော်ပြထားပြီး ဆံပင်အတို၊ အရှည်၊ အလယ်အလတ်စသည်ဖြင့် ခေါင်းစဉ်များခွဲထားတာကြောင့် မိမိနှစ်သက်ရာပုံစံများကို အလွယ်တကူရှာဖွေရယူနိုင်ပါတယ်။ ယောက်ျားလေးဆံပင်ပုံစံ၊ မိန်းကလေးဆံပင်ပုံစံ စုံလင်စွာမြင်တွေ့ရပြီး မိမိအလိုရှိသောပုံစံများကို အခမဲ့ရယူကာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆံပင်ပုံစံပေါင်းမြောက်များစွာအား ဓါတ်ပုံများနှင့်တကွဖော်ပြထားတာကြောင့် အလွန်လွယ်ကူစေကာ မိမိအလိုရှိသည့်ပုံစံအလိုက် ရှာဖွေရယူနိုင်ပါတယ်။
ယခုတစ်ခေါက်ဖော်ပြပေးချင်တဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်ကတော့ wallpaper များ၊ ကဗျာ၊ ဟာသ၊ ဂိမ်း၊ ဗီဒီယို၊ ဖိတ်စာကဒ်များအပြင် Icon နှင့် Screensaver များကိုပါ တစ်စုတစ်ပေါင်းတည်း ရယူအသုံးပြုစေနိုင်မည့် ဆိုက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်အတွင်း စိတ်လက်ပေါ့ပါးစေနိုင်မည့် Online Game များကို ထည့်သွင်းပေးထားပြီး လှပပြီးနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းမွန်သော ဓါတ်ပုံများ၊ Card များကိုပါ အခမဲ့ရယူစေနိုင်မည့် ဆိုက်တစ်ခုပဲဖြစ် ပါတယ်။ မိမိရှာဖွေရယူလိုသော အကြောင်းအရာအလိုက်ခေါင်းစဉ် များခွဲခြားထားပြီး အလွယ်တကူ ရှာဖွေကာ ရယူအသုံးပြုနိုင်စေမည့် ၀က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကတော့ Computer Music ဖန်တီးရာမှာ အသုံးပြုစေနိုင်မည့် အသံဖိုင် Sound များကို အ လွယ်တကူရယူအသုံးပြုနိုင်စေမည့် ဆိုက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအသံ ဖိုင်များအား MP3 File အနေဖြင့် ရယူနိုင်ပြီး ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများ အတွက် အဓိကအသုံးပြုစေနိုင်မည့် Sound Effect များကိုအဓိကထည့် သွင်းပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Sound Effect များအားခေါင်းစဉ် အလိုက် အမျိုးအစားခွဲခြားပေးထား ပြီး စကားပြောသံများ၊ ကားမောင်းသံများအပြင် အခြားကွန်ပျူတာ အသံဖိုင်အများအပြားကိုပါ အလွယ်တကူရှာဖွေကာ အခမဲ့ရယူအသုံးပြုနိုင်စေပါတယ်။ ထို့ပြင် အခြား Sound Effect များရရှိစေနိုင်မည့် ၀က်ဘ်ဆိုက် Link များကိုပါထည့် သွင်းပေးထားတာကြောင့် ပိုမိုအ ဆင်ပြေစေပါတယ်။
ယခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်ကတော့ အိမ်တွင်းအလှမွေးကြ သော ခွေးကလေးများအတွက်လမ်း ညွှန်မှုများ၊ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ကြော်ငြာများ၊ စသည်တို့ကို ဖော်ပြပေး ထားတဲ့ ဆိုက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်အတွင်းရှင်းလင်းသော အ ပြင်အဆင်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး ခွေးများ နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများကို အ များအပြားဖတ်ရှုနိုင်စေပါတယ်။ ၀က်ဘ် ဆိုက်အတွင်း ကြော်ငြာများ၊ သတင်း များ၊ လမ်းညွှန်မှုများ၊ အခြား Link များ အစရှိတဲ့ ခေါင်းစဉ်များခွဲခြားပေးထား တာကြောင့် အသုံးပြုသူအတွက်ပိုမို အ ဆင်ပြေစေပါတယ်။ အကြောင်းအရာ အလိုက်အခမဲ့ရယူ အ သုံးပြုနိုင်သလို member အနေဖြင့်လည်း sign in ပြု လုပ်ကာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှင့်ပတ်သက်၍အခြေခံမှစကာဖြစ်ပေါ် တတ်တဲ့ ပြဿနာများ၊ ပျက်စီးမှုများအစရှိ သည်တို့အတွက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်နည်းများ၊ ဖြေရှင်းနည်းများစတာတွေကို အဆင့်ဆင့်ဖော်ပြပေးထားတဲ့ ဆိုက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်အ တွင်း Hardware ပြဿနာများအပြင် Software များကိုပါတွေ့မြင်ရပါတယ်။ ထို့ပြင် E-book များ၊ သတင်းအချက် များကိုပါရယူအသုံးပြုနိုင်ပြီး email အ တွင်းသို့ပေးပို့စေလိုလျင်လည်း subscribe ပြုလုပ်ကာ ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဆိုက်အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသတင်း အချက်အလက်များ၊ ကာကွယ်နည်း များကိုဖော်ပြထားသည့်အပြင် အလွယ် တကူရှာဖွေပေး နိုင်စေရန် search bar ထည့်သွင်း ပေးထားပါတယ်။
အွန်လိုင်းမှတဆင့်ပေါ့ပေါ့ပါး ပါးနှင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်း သော ဂိမ်းကလေးများကိုဆော့ကစားနိုင် စေမည့်ဆိုက်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်အတွင်းအလွယ်တကူ ရှာဖွေအသုံး ပြုနိုင်စေရန်အတွက် Search Box ပါ ၀င်ကာဆိုက်၏ အပြင်အဆင်မှာလည်း အသုံးပြုရာမှာ ရိုးရှင်းလွယ်ကူပါတယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင်း Action ဂိမ်းများ၊ Sport ဂိမ်းများ၊ ဉာဏ်စမ်းဂိမ်းများအပြင် Multiplayer ဂိမ်းများကိုပါ ထည့် သွင်းပေးထားတာကြောင့် မိမိနှစ်သက်ရာ အလိုက်ရွေးချယ်ကာ ကစားနိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင် ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင်း နောက်ဆုံးပေါ် ဂိမ်း အသစ်များ၊ Top Ten ဂိမ်းများအပြင် အက္ခရာအလိုက် ဖော်ပြထားသော ဂိမ်း ပေါင်း မြောက်များစွာကိုတွေ့မြင်ရပါ တယ်။
Adobe မှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Flash Animation ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် ပတ် သက်ပြီး Tutorial အများအပြားကို ဖော်ပြပေးထားတဲ့ ဆိုက်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဆိုက်အတွင်း Flash ဆော့ဖ်ဝဲ နှင့်ပတ်သက်၍ အဆင့်ဆင့်လေ့လာ နိုင်စေရန်စီစဉ်ပေးထားပြီး သင်ခန်း စာများအလိုက် တစ်ဆင့်ခြင်းလေ့လာ နိုင်စေပါတယ်။ ၀က်ဘ် ဆိုက်အတွင်း Flash နှင့်ပြုလုပ်ထားသော ဖိုင်များ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ Template များအပြင် Video ဖိုင်များကိုပါ ထည့်သွင်းပေး ထားတာကြောင့် လေ့လာသူများအ တွက်ပိုမိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။ ထို့ပြင် Flash Website Template များ၊ အပြင် Dreamweaver, Fireworks , Photoshop CS Tutorial များကိုလည်း လေ့ လာနိုင်စေပါတယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်အတွင်း Flash နှင့်ဖန်တီး ထားသောဖိုင်အများအပြားကိုလည်း အလွယ်တကူရယူနိုင်စေ ရန်ထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့် ယခုမှစတင်၍ Flash Animation လေ့လာသူများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဖော်ပြလိုက်ပါ တယ်။
ယခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ဝက်ဘ် ဆိုက်ကတော့အမျိုးသမီးအ၀တ်အ စားများ၊ ပုံစံဒီဇိုင်းများ၊ ခြုံငုံသုံးသပ် ချက်များအပြင်ရှေးခေတ်အ၀တ်အ စားပုံစံများကိုပါလေ့လာနိုင်စေမည့် ဆိုက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်ဘ် ဆိုက်အတွင်းအလွယ်တကူရှာဖွေအ သုံးပြုနိုင်စေရန် Search bar ထည့် သွင်းပေးထားပြီး ခုနှစ်သက္ကရာဇ် အလိုက်အ၀တ်အစားပုံစံများကို လည်းရှာဖွေရယူနိုင်ပါတယ်။ ယ ခင်လွန်ခဲ့သော ၁၉၂၀ ခုနှစ်မှ ယနေ့ခေတ်အထိ အမျိုးမျိုးသော အ၀တ်အစားပုံစံများ၊ ပြုလုပ်ပုံအ ဆင့်ဆင့်နှင့်သမိုင်းကြောင်းများ၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနည်းများကိုလည်း တွေ့ ရပါတယ်။ ထို့ပြင်အခြား design နှင့်ပတ်သက်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များ နှင့်ပါချိတ်ဆက်ပေးထားပြီး fashion နှင့်ပတ်သက်သော e-book များကိုလည်းအခမဲ့ရယူနိုင်ပါတယ်။
ဂီတအနုပညာနှင့်ပတ်သက်၍ ရှေးခေတ်ဂန္ဓ၀င်ဂီတတီးခတ်မှုများ၊ ဂီတသီအိုရီများ၊ နုတ်များ၊ တီးလုံး တီးကွက်များ၊ အစရှိသဖြင့်လေ့လာ နိုင်စေတဲ့ဆိုက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုက်အတွင်း ရှေးခေတ်ဂီတပညာ ရှင်မြောက်များစွာ၏ကိုယ်ရေးမှတ် တမ်းများ၊ ၎င်းတို့၏သီချင်းများ၊ နုတ်များ၊ E-book များအစရှိတာ တွေကိုလေ့လာနိုင်ပြီးအလွယ်တကူ အခမဲ့ download ပြုလုပ်ကာရယူ နိုင်စေပါတယ်။ ဆိုက်အတွင်းသီချင်း ဖိုင်များကို MP3 File အပြင် Midi File များအနေဖြင့်ပါ လွှင့်တင်ပေးထားပါတယ်။ စန္ဒယားတီးလုံးနှင့် နုတ်များကိုအဓိကဖော်ပြထားပြီး music piece အများအပြားကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ဂီတပညာရှင် များ၏အမည်အလိုက်ရှာဖွေနိုင် သလိုသီချင်းအမည်ဖြင့်လည်းရှာ ဖွေရယူနိုင်ပါတယ်။
Computer Programming Language များတွင် Java ဟာအဓိကအရေးပါပြီး ကောင်းမွန်ပြည့်စုံသော Language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် Java ကိုလေ့လာလိုသူများအတွက် ယခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ဆိုက် ကတော့အတော်လေးကောင်းမွန် ပြီးအလွယ်တကူလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဆိုက်အတွင်း Java နှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ အ ဆင့်ဆင့်လေ့လာချက်များအပြင်အ ခြား Programming language များဖြစ်တဲ့ HTML, XML နှင့် SQL Tutorial များကိုပါထည့် သွင်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ထို့ ပြင် Java နှင့်ပတ်သက်သောစာ မေးပွဲများ၊ မှတ်စုများအပြင် Tutorial အများအပြားကိုထည့်သွင်း ထားပြီး အမြန်ဆုံးနှင့်အထိရောက် ဆုံးလေ့လာနိုင်စေပါတယ်။
ယခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ဆိုက် ကတော့ Windows XP နှင့် Vista တွင်ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင် သော Theme များကိုဖော်ပြထား တဲ့ဆိုက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်ဘ် ဆိုက်အတွင်းနောက်ဆုံးပေါ် Windows Theme များကိုတွေ့ရှိ ရပြီးအလွန်လှပကာစွဲဆောင်မှုရှိပါ တယ်။ ထို့ပြင် Wallpaper အများ အပြားကိုလည်းအခမဲ့ရယူနိုင်ပြီး အမျိုးအစားအလိုက်ခေါင်းစဉ်များ ခွဲကာဖော်ပြထားပါတယ်။ ဆိုက် အတွင်း download အများဆုံးပြု လုပ်ကြသော Theme များကိုရွေး ချယ်ဖော်ပြထားပြီး ရှာဖွေရာတွင် လွယ်ကူအဆင်ပြေစေရန်အတွက် Search Bar ထည့်သွင်းပေးထား ပါတယ်။
မွေးနေ့ကိတ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် ချစ်စဖွယ်ကောင်းသောကိတ်မုန့် ကလေးများကဲ့သို့ပြုလုပ်နည်းများ ကို အခမဲ့လေ့လာနိုင်စေရန်အ တွက်ဖော်ပြပေးထားတဲ့ဝက်ဘ် ဆိုက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ မွေ့နေ့ ကိတ်ပုံစံအမျိုးမျိုးအား မြောက်များ စွာတင်ပြပေးထားပြီး ပြုလုပ်ပုံအ ဆင့်ဆင့်ကိုလေ့လာနိုင်စေဖို့အ တွက်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ကိတ် ပုံစံအမျိုးမျိုးခွဲခြားထားပြီးကလေး ကြိုက်ပုံစံများ၊ အားကစားကိုယ် စားပြုကိတ်များ၊ အနားယူအပန်း ဖြေစဉ်ပြုလုပ်ကြသည့်ကိတ်ပုံစံ များစသည်ဖြင့် မြောက်များစွာ သောအကြောင်းအရာတို့ကိုလေ့ လာနိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင်ကိတ်မုန့် အဆန်းအပြားများပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍အမေးအဖြေများ၊ စိတ်ကူးများကိုလည်းဖတ်ရှုလေ့ လာနိုင်စေပါတယ်။
မိမိအားလပ်သည့်အချိန်ခဏ အတွင်းစိတ်လက်အပန်းပြေစေရန် အတွက် အွန်လိုင်းမှတဆင့်ပျော် ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောဂိမ်းများဆော့ ကစားနိုင်စေရန်အတွက်ရည်ရွယ် ထားသည့်ဆိုက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်အတွင်းအလွယ်တကူ ဆော့ကစားနိုင်စေမည့်ဂိမ်းပေါင်း မြောက်များစွာကိုထည့်သွင်းဖော် ပြထားပြီးလူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်း များ၊ ဘောလုံးနှင့်ပတ်သက်သော ဂိမ်းများအခြားအားကစားဂိမ်းများ၊ သေနတ်ပစ်ဂိမ်းများ၊ ဟာသဂိမ်း များ၊ ဉာဏ်စမ်းများစသည်ဖြင့်အ ကြောင်းအရာများခွဲခြားပေးထားပါ တယ်။ ထို့အပြင်ရှာဖွေရလွယ်ကူ စေရန်အတွက်အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ ABCD အလိုက်ခွဲခြားဖော်ပြထား ပြီးဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ကာရယူဆော့ ကစားနိုင်ပါတယ်။
http://www.mikekhelay.co.cc ************** USB Formwt
» www.Myanmartalk.net ပြည်တွင်းဖြစ်အီးမေး၊ chart phone တွေကို
» www.nyinaymin.net WIN RARမရှိသူများအတွက်
» www.etelegram.net.mm မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှလွင့်တင်ထား
သော online မှ
» www.Myanmar-pac.org မြန်မာအင်တာနက်ကဖေးဆိုင်များအတွက်ဝက်ဆိုက်
» www.ezy.haiovs.org 100 Mb file များကို upload တင်၍ share လုပ်နိုင်
» www.waitzar.com မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်လင့်များကိုကြည့်ရူ့နိုင်
» www. freeonlinesarveys.com မြန်မာတို့ရဲ့တစ်ကိုယ်ရည်စာမျက်နှာစာရင်းများဖော်ပြ
» www. ကြိုက်တဲ့ဆူဒိုခုဥာဏ်စမ်းကိုအဖြေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့
» www. nativemyanmar.net ကဏ္ဍစုံပါတဲ့မြန်မာဝက်ဆိုက်ကလေးပါ
» www. Myanmar-pac.org မြန်မာအင်တာနက်ကဖေးဆိုင်များအတွက်ဝက်ဆိုက်
» www.myanmarengineering.org မြန်မာကွန်ပျူတာပညာရှင်များမှဖွဲ့စည်းထားပြီး IT.ပညာရပ်များသင်ကြားပေးသောဆိုက်
» www.MCPA-myanmar.org မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်များအသင်း၏
» www.Networksolution.Net သင်လိုချင်တဲ့ဝက်ဆိုက်လိပ်စာအသစ်ဟာ
» www.fixingmycomputer.com ကွန်ပျူတာပြုပြင်ရေးလမ်းညွှန်ဆိုက်
» www.majorgeeks.com ကွန်ပျူတာဆားဗစ်recovery /back-upဆော့ဖ်ဝဲများ
» www.myanmaritpro.com ပြည်တွင်း ITနည်းပညာဝက်ဆိုက်
» www.Tutorialized.com လေ့လာဖို့ Tutorial ဆော့ဝဲများအစုံရှိတဲ့ဆိုက်
» www.webdesign.org ဝက်ဆိုက်ဒီဇိုင်းတွေလေ့လာဖို့သင်ခန်းစာတွေ
» www.w3schools.com ဝက်ဆိုက်ဒီဇိုင်းတွေလေ့လာဖို့သင်ခန်းစာတွေ
» www.sixrevisions.com web pageလုပ်ချင်သူများနမူနာလမ်းညွှန်နဲ့ဒီဇိုင်းတွေ
» www.newevolutiondesigns.com web pageလုပ်ချင်သူများလမ်းညွှန်ဆိုက်
» www.getnetwise.com အင်တာနက်ကိုလုံခြုံစွာသုံးနိုင်ရေးအတွက်လမ်းညွှန်
» www.w3schools.com HTML,NET,XML,Flash စတဲ့သင်ခန်းစာတွေအခမဲ့
» www.computerhope.com ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာsoftware/hardwareပြဿနာများ
» www. tizag.com websiteရေးသားဖို့အတွက်လေ့လာချင်သူတွေ
» www.webteacher.org ဝက်ဆိုက်အခြေခံဗဟုသုတတွေ၊ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဆိုက်
» www.world-cat.org ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကစာကြည့်တိုက်တွေကိုကွန်ရက်
» www.elo-godesign.com လိုဂိုအကောင်းဆုံးလင့်ခ် ၃၀၀ ကျော်ကိုစုစည်း
ပေးထားတဲ့ဝက်ဆိုက် portableapps.com ပေါ့ပါး
» www.pic-nik.com သင့်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာတည်းဖြတ်
» www.betterworldlinks.org websiteသုံးသောင်းကျော်အဖြစ်အပျက်တွေကို
» www.the-zeal.com ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ရင်းနှီးမြှုပ်မှု၊အမြတ်အရှုံးတွေကိုစီမံ
ခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ Money Manager Ex ဆိုတဲ့Freewareကို
» www.photobucket.com ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတင်နိုင်/ကြည့်ရှုနိုင်သည့်ဝက်ဆိုက်
» www.3dtotal.com သရီးဒီပုံတွေကိုခေါင်းစဉ်နဲ့အကြောင်းအရာအသီးသီး
» www.say-it.com seal အမှတ်အသားတံဆိပ်တစ်ခုအွန်လိုင်းကနေချက်
» www.pagebybagebooks.com အခမဲ့ရနိုင်တဲ့ E-book တွေကိုဖတ်ရှုနိုင်၊အခမဲ့ဆွဲချနိုင်
» www.meebo.com yahooသုံးသူရော၊Gtalk သုံးသူရော MSN သုံးသူရော
» www.com-puter.howstuffworks.com ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဘယ်လိုအလုပ် လုပ်ကြတယ်ဆိုတာပြောပြပေးတဲ့ဆိုက်
» www.dafont.com စာလုံးဖွန့်ရာပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာရှိ
» www.fileinfo.net သင်မသိတဲ့ဖိုင်အမျိုးအစားတွေကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပေးတဲ့
» www.bok.google.com မြန်မာရှေးဟောင်းစာအုပ်များကိုအခမဲ့ဆွဲယူရရှိ
» www.scratch.mit.edu ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ဗဟုသုတမရှိဘဲလှုပ်ရှားမှု
» www.box.net နေရာတိုင်းကနေဆွဲယူအသုံးပြုနိုင်တဲ့အပြင် file
တစ်ခုချင်းကို share လုပ်လိုသူထဲအလွယ်တကူ
» www.Yantanarpon.com.mm ကဏ္ဍစုံပါဝင်သောပြည်တွင်းဝက်ဆိုက်တစ်ခု
» www.wikipedia.org ဝေါဟာရပေါင်းစုံ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များရှာရန်ဆိုက်
» www.sizeablesend.com ကြီးတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ၊ဗီဒီယိုတွေကိုအီးမေးနဲ့အခမဲ့
» www.emailfuture.com အီးမေးကိုလေးငါးနှစ်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အချိန်ကျမှ
» www.nodevice.com ကွန်ပျူတာဒရိုက်ဘာ ဆော့ဝဲသုံးသောင်းကျော် အခမဲ့
» www.Funmunch.com ဝေါပေပါအိုင်ကွန်၊ screensaner ကဗျာ၊ဟာသဂိမ်း
» www.engadget.com နည်းပညာပစ္စည်းလေးတွေမျိုးစုံအကြောင်း
» www.sovrceforge.net အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးတွေရနိုင်တဲ့ဆိုက်ပါ
» www.it men.com ကွန်ပြူတာနည်းပညာဆိုင်ရာများကိုဖေါ်ပြထားသော
» www.mmitdevelopment@Jacomda.im အိုင်စီတီနည်းပညာများကို GTalkမှမေးမြန်းနိုင်သည့်
» www.speakingfaces.com သင့်မျက်နှာဓာတ်ပုံကိုပို့ပေးလိုက်ရင်စမတ်ကျသူလား
» www.Whoreadme.com သည်ဆိုက်ကနေအီးမေးပို့ရင်သင့်အီးမေးကိုလက္ခံသူ
» www.festisite.com ကမ္ဘာ့ငွေကြေးစက္ကူတွေပေါ်မှာသင့်မျက်နှာကို
» www.myxer.com ဖုန်းအတွက်Dingtoneများဖုန်းဆော့ဝဲများ
» www.Myxer.com ဖုံးအတွက်Ring tone wallpaper.video.game တွေ
» www.zamzar.com သင့်ဖိုင်ကိုဓာတ်ပုံ၊ရုပ်ပုံနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖိုင်အမျိုးမျိုးစာစီ
power point စသဖြင့် လွယ်လင့်တကူ
» www. imagevenue.com သင့်ဘလော့ဂ်ထဲမှာပုံလေးတွေထည့်နိုင်အောင်အခမဲ့
» www.pvsusa.com မောက်စ်ဖြင့်ရုပ်ပုံ၊စာလုံးတုိ့ရေးဆွဲပြီးအီးမေးလ်နဲ့
» www.altools.net ဓာတ်ပုံတွေပြောင်းလဲဖို့၊အရောင်တွေညှိဖို့၊ဓာတ်ပုံ
အချင်းချင်းပေါင်းစပ်နိုင်တဲ့ALSee ဆိုတဲ့အခမဲ့
» www.Brave.net freewebpageရနိုင်သောဆိုက်
» www.pattern8.com photoshopတွင်သုံးနိုင်သော patternများကိုအခမဲ့
» www.patternHead.com photoshopတွင်သုံးနိုင်သော patternများကိုအခမဲ့
» www.brusheezy.com photoshopအတွက် Brush များအခမဲ့ရနိုင်တဲ့ site
» www.ronyasoft.com စာတွေ၊ဇယားတွေ၊ခေါင်းစဉ်တွေ၊ပြက္ခဒိန်တွေကိုအခမဲ့
» www.mandalayalpha.com ဇော်ဂျီဖောင့်ရယူနိုင်တဲ့ဝက်ဆိုက်
» www.fontcubes.com စာလုံးဖောင့်များအခမဲ့ရယူနိုင်သောဆိုက်
» www.mediafire.com ဖိုင်တွေကိုဝက်ဘ်ပေါ်မှာယူသုံးဖို့အခမဲ့သိမ်းပေးတဲ့
» www.Loonapix.com ဓာတ်ပုံများကိုအခမဲ့ပြုပြင်ပြီးလူမှုရေးဆိုက်တင်နိုင်တဲ့
» www.photocase.com ဓာတ်ပုံများကြည့်ရှုနိုင်သည်
» www.photoshopcontest.com ဓာတ်ပုံများကြည့်ရှုနိုင်သည်
» www.handwarecentral.com ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာနည်းပညာဝက်ဆိုက်
» www.tech guy.org ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာနည်းပညာဝက်ဆိုက်
» www.webmonkeh.com programing ဆိုင်ရာဝက်ဆိုက်
» www.similicio.us တူတဲ့website တွေစုပေးထားသည့်ဝက်ဆိုက်
» www.InternetArchieve.com နာမည်ကြီးဝက်ဆိုက်ထောင်သောင်းရဲ့ဟိုးယခင်မူလ
ထားတဲ့ဆိုက်ပါAardvark.com Search Engine
» www.drop.io သင်ကြိုက်ရာဖိုင်ကိုonlineပေါ်မှာသိမ်းထားနိုင်၊
» www.Gret High Now.com သိပ္ပံအမြင်အာရုံဆိုင်ရာဆိုက်တစ်ခု
» www.only-positive-news.com ကမ္ဘာရဲ့ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းတွေကိုပဲရွေးပြီး
» www.avto-horkey.net မန်မိုရီစတစ်ထဲမှဖိုင်တွေဖျက်ပစ်ပြီးရင်ပြန်ရှာလို့
» www.sputtik.com အကောင်းဆုံးနဲ့အခမဲ့ဝက်ဆိုက်တွေကိုရှာဖွေညွှန်ပြ
ပေးနိုင်မယ့် search engine ဝက်ဆိုက်
» www.filetac.com ဖိုင်တွေဓာတ်ပုံတွေကို 2G ပမာဏအထိချုံ့နိုင်
» www.cointossr.com တစ်နေရာစီကလူနှစ်ယောက်ဟာသည်ဆိုက်ကိုဝင်ပြီး
» www.cs4fn. org ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပျော်ရွှင်စရာ
» www.mrpicassohead.com ပီကာဆိုလက်ရာလူပုံတွေကိုသင်ကိုယ်တိုင်
» www. translation.com ဘာသာစကားပေါင်းများစွာကိုဘာသာပြန်ပေးနိုင်တဲ့
» www.elibrary.net.mm ဘာသာပြန်ဆော့ဝဲများကိုအခမဲ့လေ့လာနိုင်
» www.getjar.com mobile phoneနဲ့ပက်သက်တာတွေကို
» www.freenaturepictures.com ဝေါပေပါများအခမဲ့ရနိုင်သော Site
» www.thefreesite.com အခမဲ့တွေရမယ့်ဆိုက်တစ်ခု
» www.magwecity.com.mm အခမဲ့ဆော့ဝဲများရမယ့်ဆိုက်တစ်ခု
» www.ezy.haiovs.org 100 Mb file များကို upload တင်၍ share
» www.dowtheme.com Wallpaper များကိုရနိုင်သော site ဖြစ်၏
» www.iconfinder.net အိုင်ကွန်ပုံပေါင်း ၁သိန်းကျော်အခမဲ့ရနိုင်တဲ့ဆိုက်
» www.socwall.com ဝေါပေပါများထောင်သောင်းချီရှိတဲ့ဆိုက်
» www.kidzdon.com online ပေါ်မှ Animation အရုပ်လေးတွေ
» www.blibs.com ကိုယ့်အိုင်ကွန်ကို Animation လုပ်လို့ရတဲ့ဆိုက်
» www.picasion.com Animation အရုပ်လေးတွေလှုပ်လိုရတဲ့ဆိုက်
» www.gickr.com Animation အရုပ်လေးတွေလှုပ်လိုရတဲ့ဆိုက်
» www.aniboom.com Animation အရုပ်လေးတွေလှုပ်လိုရတဲ့ဆိုက်
» www.fluxtime.com Animation အရုပ်လေးတွေလှုပ်လိုရတဲ့ဆိုက်
» www.animasher.com Animation အရုပ်လေးတွေလှုပ်လိုရတဲ့ဆိုက်
» www.friend18.com ရုပ်ပုံများ၊ flash animationများဟာသများကို
» www.Coolclips.com clipartပုံလေးတွေမျိုးစုံယူလို့ရတဲ့ဆိုက်
» www.video.google.com ဓာတ်ပုံများဗီဒီယိုများအစုံရှိသောဆိုက်
» www.youtube.com ဓာတ်ပုံများဗီဒီယိုများအစုံရှိသောဆိုက်
» www.myspace.com ဓာတ်ပုံများဗီဒီယိုများအစုံရှိသောဆိုက်
» www.break.com ဓာတ်ပုံများဗီဒီယိုများအစုံရှိသောဆိုက်
» www.dailymotion.com ဓာတ်ပုံများဗီဒီယိုများအစုံရှိသောဆိုက်
» www.metacafe.com ဓာတ်ပုံများဗီဒီယိုများအစုံရှိသောဆိုက်
» www.putfile.com ဓာတ်ပုံများဗီဒီယိုများအစုံရှိသောဆိုက်
» entheosweb.com Flashanimationဖိုင်နမူနာများရှိသည် ထထထထထထထထထထထထထထထထထထထထထထထထထထထထထထထထ
» www.getjar.com mobile phoneနဲ့ပက်သက်တာတွေကိုကြည့်နိုင်
» www.stardownloader.com ဖိုင်ကြီးတွေကိုအပိုင်းအပိုင်းစိတ်ပြီး download ချလို့ရတဲ့ဆော့ဝဲ ရှိတဲ့ဆိုက်ပါ
» www.portablefreeware.com အခမဲ့ portable soft ware ရနိုင်သောဝက်ဆိုက်
» www.esoft.web.Id free wareများရနိုင်သောဝက်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
» www.softpedia.com free wareများရနိုင်သောဝက်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
» www.download.cnet.com free wareများရနိုင်သောဝက်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
» www.makeuseof.com free wareများရနိုင်သောဝက်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
» www.sharewareplaza.com free wareများရနိုင်သောဝက်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
» www.Zqware.com free wareများရနိုင်သောဝက်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
» www.freewarefiles.com free wareများရနိုင်သောဝက်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
» www.fileforum.betanews.com free wareများရနိုင်သောဝက်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
» www.download.com free wareများရနိုင်သောဝက်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
» www.sourceforge.net free wareများရနိုင်သောဝက်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
» www.winaddon.com free wareများရနိုင်သောဝက်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
» www.soft82.com free wareများရနိုင်သောဝက်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
» www.magwecity.com.mm free ware များရနိုင်သော မြန်မာဝက်ဆိုက်တစ်ခု
» www.Ircmm.org မြန်မာပြည်မှတင်ထားသော Linux နည်းပညာဆိုင်ရာ
» www.Lyngsat.com ဂြိုဟ်တုစလောင်း tv ကုတ်နံပါတ်တွေရှာနိုင်တဲ့
» www.uneyclopedia.org ဝီကီပီးဒီးယားနဲ့ဆင်တူတဲ့စွယ်စုံကျမ်းဝက်ဆိုက်ပါပဲ
» www.lifehacker.com နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့
» www.aftervote.com သည်ဝက်ဆိုက်မှာဂူဂဲလ်၊ရာဟူး၊MSN,Diggဝက်ဆိုက်
» www.answerbag.com မေးချင်တာမေးတစ်မိနစ်အတွင်းဖြေပေး၏
» www.langid.net မသိတဲ့စာကြောင်းကိုကော်ပီကူးပြီး ကိုရီးယားလား
» www.Ultrasonic-ringtones.com ကိုယ်ပဲကြားရပြီးတစ်ခြားလူတွေမကြားရတဲ့
» www.scopesys.com သင်သိချင်တဲ့နေ့စွဲကိုရိုက်ထည့်ပြီးအဲဒီနေ့ရဲ့ ထူးခြား
» www.onlinefunsite.com ဟာသဆန်ဆန်ဓာတ်ပုံတွေ ဂိမ်းတွေ၊ရုပ်ပုံတွေဖေါ်ပြ
» www.oddee.com ကမ္ဘာပေါ်မှအထူးအဆန်းဆုံး၊သတင်း၊ပစ္စည်း၊ဖြစ်ရပ်၊
» www.Dailymotion.com ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကြည့်လို့ရတဲ့ဆိုက်ပါ
» www.onlinefunsite.com ဟာသဆန်ဆန်ဓာတ်ပုံတွေ ဂိမ်းတွေ၊ရုပ်ပုံတွေပါတဲ့
» www.beautifulpeople.com ရုပ်ချောသူများကိုသာဝင်ခွင့်ပြုသည့်ဝက်ဆိုက်
» www.cracked.com ရယ်စရာအစုံရှိနေတဲ့ဆိုက်ပါ
» www.bluesfear.com ရုပ်ပုံချည်းစုပေါင်းရေးဆွဲထားတဲ့စုစုပေါင်အရှည် ၈၂ပေ
တစ်ခုပါ- » www.world wide tdescope.com သင့်ကွန်ပြူတာနေအကာသထဲကိုတယ်လီစကုပ်နဲ့
http://www.beautifulmodelworld.com/ ﻿Body Spray နှင့် ရေမွှေး
http://downloads.ziddu.com/ upload site
http://www.igetweb.com/modules/images/icon/iconstatus/update-12.gif green marquee
http://www.instructables.com/ **LED monetine 158285158285630447
http://patheincity.com/news/ Patain City
http://phoelapyae.com/ server about ******************************
http://e-infotainment.com/applications/blogger-template-generator/v2/application.php blogger Template******ready make
http://www.freebooklinks.com download books
http://www.coloursrainbow.com guy com
http://myothantzaw.wordpress.com ********** for template colour
http://www.samachartoday.com world daily news english
http://khansarrhmuhmattine.blogspot.com/ Auto CAD *********************
http://mmdailynews.com/ Auto CAD**********************
http://www.lambda.org/symbols.htm ။ ။ ။ ။
http://www.flickr.com slid show making
http://www.yuonline-wbts.com/ ရန်ကုန်သက္ကသိုလ် ကွန်ပျူတာနှင့်နည်းပညာဋ္ဌာန ULB
Diploma in Computer Science ဘွဲ့လွန်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဒီပလိုမာ DCS
http://forverfriends.ning.com/profiles/blogs/photoshop-ebook photoshop lessons eBook 158285158285630447
http://www.drwinthein.info/ Dr Win Theain
http://www.moonthetpan.com/ De မွန်းသက်ပန်
http://www.lunapic.com/editor/ online photo editor
http://www.myanmarcgiaward.com/ ********************* photoshop ******good
http://kp3family.blogspot.com/ blogger good***************
http://www.zuzuaung.co.cc Hnin Hnin
http://centralupload.com upload site
♥ ♥ ♥ နည်းပညာပိုင်ဆိုင်ရာ လေ့လာရန် လမ်းညွှန် ♥ ♥ ♥
www.slip-meepyatite.blogspot.com/ = SLIP MEE PYA TITE=
http://www.meepyatite.info/ = မီးပြတိုက်=
http://www.kyawswarnyein.com/ = ကိုကျော်စွာငြိမ်း =
http://cadmyanmar.blogspot.com/ = CAD MYANMAR= အော်တိုကတ်နည်းပညာများလေ့လာရန်။
http://blog.nyilynnseck.com/ = ညီလင်းဆက်=ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။
www.mone-tine.com/ = မုန်တိုင်း= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။
http://www.sbsangpi.com/ = IT RESHARE SITE= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။
www.kp3family.blogspot.com/ = KP3 FAMILY=ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။
www.nyinaymin.com/ = ညီနေမင်း= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။
www.knowledgewar07.com/ = ကိုမိုးထက်မြင့်= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။
www.soemin.net/ = ကိုစိုးမင်း= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။
www.kozaw357.multiply.com/ = ကိုဇော်= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။
www.htootayzar.com/ = ထူးတေဇာ= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။
http://mmshare.org/ = MM SHARE = ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။
http://www.myanmaritmen.org/ = အိုင်တီသမားများ= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။
www.saturngod.net/ = စေတန်ဂေါ့= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။
http://blog.mghla.net/ = မောင်လှ= ကွန်ပျူတာနှင့်ဓါတ်ပုံ နည်းပညာများ။
www.kokyawmyintoo.blogspot.com/ = ကိုကျော်မြင့်ဦး=
www.problemclean.ning.com/ = MYANMAR IT DEVELOPMENT=
http://thanlonnge.net/ = သံလုံငယ်= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။
www.simplehelp.net = မိမိကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်၍ ပြဿနာများရှိခဲ့လျှင်
www.helpwithpcs.com = ကွန်ပျူတာသင်ခန်းစာများကို အမျိုးအစားစုံလင်စွာလေ့လာရန်
www.asia-oss.net = Open Source စနစ်ကိုလေ့လာသူများ မဖြစ်မနေ၀င်လေ့လာသင့်သည်
www.wwpi.com = ကွန်ပျူတာပညာရပ်များအပြင်၊ Network ပညာများကိုလည်းသင်ယူနိုင်သည်
www.educational-software.com = ဆော့ဖ်ဝဲဘာသာရပ်များကို လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါသည်
www.educationalsoftware.co.uk = ဆော့ဖ်ဝဲဘာသာရပ်များကို သင်ယူနိုင်ပါသည်
www.okino.com = ဂရပ်ဖစ်သုံးဆော့ဖ်ဝဲဘာသာရပ်များစွာကို လေ့လာနိုင်သည်
www.emailaccount.com = Domain များစွာကို
စိတ်ကြိုက်ရနိုင်ပြီးလွယ်ကူသုံးချ အခမဲ့ရသော mail
www.gawab.com = Language များစွာကို စိတ်ကြိုက်ရနိုင်ပြီး
လွယ်ကူစိတ်ကြိုက်ရနိုင်ပြီးလွယ်ကူသုံး ချ အခမဲ့ရသော mail
www.merriam-webster.com = အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူများအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာလေးပါ
www.learningpage.com = ဘာသာရပ်အစုံ လေ့လာချင်သူများအတွက်
www.shareme.com = ကွန်ပျူတာပညာရပ်များ၊ စီးပွားရေးပညာရပ်များအပါအ၀င်
http://search.imesh.com = ဒီဆိုက်မှာ ဆော့ဝဲလ်တွေအများကြီး free ဒေါင်းလို့ရတယ်
http://www.filehippo.com/ = စုံလင်တဲ့ Free Software ဆိုဒ်ပါ ။
http://www.picget.net = မိမိဓါတ်ပုံတွေကို ဘောင်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးနဲ့
အလှပြုပြင်နိုင်တဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပိုတိုဆောဖ့်ဝဲလ်တွေပါ
♥ ♥ ♥ နည်းပညာ ဖိုရမ် လမ်းညွှန် ♥ ♥ ♥
http://www.mmgeeks.org/forum/ = MM GEEKS= နည်းပညာဖိုရမ်များဖတ်ရှုရန်။
http://www.mmso.org/ = MMSO= ဖိုရမ်မှဗဟုသုတများရှာဖွေရန်။
www.aask.my-mm.org/ = MYANMAR OVERFLOW= ဗဟုသုတရစရာအမေးနှင့်အဖြေများ။
www.amyanmaritpros.com/ = MYANMAR IT PROFESSIONAL= နည်းပညာလေ့လာရန်။
www.mysteryzillion.org/ = MYSTERY ZILLON FORUM= နည်းပညာများဆွေးနွေးရန်။
http://www.myanmartutorials.com/ = MYANMAR TUTORIALS=
http://www.mmphotoshop.net/ photoshop သင်ခန်းစာ များလေ့လာနိုင် ပါသည်။ ..
http://www.knowledgewar07.blogspot.com/ နည်းပညာ နှင့် E-books
♥ ♥ ♥ အော်တိုကတ်နည်းပညာ လမ်းညွှန် ♥ ♥ ♥
http://cadmyanmar.blogspot.com/ = CAD MYANMAR = အော်တိုကတ်နည်းပညာများလေ့လာရန်။
http://www.creativelayer.net/ = CREATIVE LAYERအော်တိုကတ်နည်းပညာများလေ့လာရန်။
http://autocaddrawing.blogspot.com/ = အော်တိုကတ်ရေးဆွဲနည်း ပညာများလေ့လာရန်။
www.engineer4myanmar.com/search/label/AutoCAD/ = ENGINEER4MYANMAR
http://chan09.blogspot.com/ = CHAN 2009 = အော်တိုကတ်လေ့လာရန်။
♥ ♥ ♥ ဓါတ်ပုံနည်းပညာ လမ်းညွှန် ♥ ♥ ♥
http://www.yoeyar.com/ = ရိုးရာ= myanmar cg art gallery
http://www.mdasociety.com/ = MYANMAR DIGITAL ART SOCIETY=
www.myanmarlensman.com/ = MYANMAR LENS MAN = မြန်မာ့ဓါတ်ပုံပညာများလေ့လာရန်။
http://99nagar.multiply.com/ = ဒီဇိုင်နာနဂါး = ဓါတ်ပုံဒီဇိုင်းပညာများလေ့လာရန်။
www.photoshoproadmap.com/ = PHOTOSHOP ROAD MAP = photoshop လေ့လာရန်။
www.mmphotoshop.net/ = MM PHOTOSHOP = mm photoshop tutorials
www.myozawlin23.blogspot.com/ = မျိုးဇော်လင်း = graphic design
♥ ♥ ♥ ၀က်ဒီဇိုင်းနည်းပညာ လမ်းညွှန် ♥ ♥ ♥
http://www.zack-notes.net/ = ၀က်ဒီဇိုင်းနည်းပညာများလေ့လာရန်။
http://www.phpmyanmar.com/ = PHP MYANMAR= ၀က်ဒီဇိုင်းနည်းပညာများလေ့လာရန်။
♥ ♥ ♥ မြန်မာဝက်ဆိုက်လမ်းညွှန် ♥ ♥ ♥
http://allmyanmarblogs.blogspot.com/ = ALL MYANMAR
www.sharbar.net/ = SHARBAR = မြန်မာဆိုက်များကိုရှာဖွေရန်။
www.searchmyanmar.com/ = SEARCH MYANMAR = မြန်မာဆိုက်များကိုရှာဖွေရန်။
http://webdirectory.all-channel.com/ = ALL CHANNEL =
http://myanmardaily.net/ = MYANMAR DAILY ဆိုက်အမျိုးမျိုးမှနေ့စဉ်ဖတ်စရာများ။
♥ ♥ ♥ နည်းပညာ သတင်းလွှာ လမ်းညွှန် ♥ ♥ ♥
http://www.worldwidemyanmar.com/ = WORLD WIDE MYANMAR=
http://www.knowledgebridge.net/ = KNOWLEDGE BRIDGE= နည်းပညာမဂ္ဂဇင်းဖတ်ရှုရန်။=
www.onlineictreader.com/ = မြန်မာအိုင်စီတီသတင်းများဖတ်ရှုရန်။
www.myanmarinternetjournal.com/ = မြန်မာအင်တာနက်ဂျာနယ်
အား jupitar ကိုရင်မောင် ရေးသားပါသည်
http://www.mediafire.com/?ememzwhndzm = Gmail ရဲ့လှုိူ့ ဝှက်ချက်တွေသိချင်ရင်
http://www.mediafire.com/?noziemyl5yj = GTALK နှင့်ပက်သက်သမျှ
http://www.mediafire.com/?050ltj4kgkd = လွယ်ကူစွာဂျီမေးနှင့်ဂျီတော့အသုံးပြုနည်း
http://www.mediafire.com/?yyyzjylj2gy = ဂူးဂဲလျို့ဝှက်ချက်များ
http://www.mediafire.com/?tzdqjdmemdj = ၀က်ဒီဇိုင်းလက်တွေ့သင်ခန်းစာများ
http://www.mediafire.com/?xagz1meq9yn = မြန်မာဘလော့တစ်ခုပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်
http://www.mediafire.com/?dgxzdjwdrmd = ၀က်ပိတ်တစ်ခုဖန်တီးခြင်း
http://www.mediafire.com/?w3cdqdzwmmx = HTML မိတ်ဆက်
http://www.mediafire.com/?twdjnizznnu = PHOTOSHOP NOTES(2) အကြောင်း
http://www.mediafire.com/?p07vsb70gmrk9q5 = ADOBE PHOTOSHOP CS (မြန်မာ)
http://www.mediafire.com/?52q0ew2umzg = TIPS AND TRICKS OF PS CS4 (အင်္ဂလိပ်)
http://www.mediafire.com/?wlzgykyjmjw = MAYA AND PHOTOSHOP (အင်္ဂလိပ်)
http://www.mediafire.com/?0yxwwztxf1k = ADOBE PHOTOSHOP 7.0
http://www.mediafire.com/?twdjnizznnu = ဖိုတိုရှော့မှတ်စုများ
http://www.mediafire.com/?jd0hmmzdqdj = ပုံရိပ်များရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံသဘာဝ
http://www.mediafire.com/?ijjgjjvz3t3 = ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းသင်ခန်းစာ
http://www.mediafire.com/?dluzztilwmb = PC MECHANIC
http://www.mediafire.com/?ytoevqnnqwy = ပီစီတစ်လုံးတပ်ဆင်ရန်ရွေးခြယ်ခြင်း
http://www.mediafire.com/?qatznyhmycx = ကွန်ပြူတာသိပံ္ပ္ပမိတ်ဆက်
http://www.mediafire.com/?dluzztilwmb = ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးမှ ကွန်ပျူတာပြင်ပါ
http://www.mediafire.com/?qnji1uh2qnj = ကွန်ပျူတာအကြောင်းအသေးစိတ်သိစရာ
http://www.mediafire.com/?zxjnayfxynw = ကွန်ပျူတာတပ်ဆင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်း
http://www.mediafire.com/?wswd9ayna1t = ကွန်ပျူတာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်
http://www.mediafire.com/?z0jmgzdyggq = ကွန်ပျူတာအဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်
http://www.mediafire.com/?dzsiyudsbh3 = သတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်
http://www.mediafire.com/?twnftxnvxtr = ကွန်ပျူတာသုံးစွဲသူတိုင်းအတွက်အင်္ဂလိပ်စာ
http://www.mediafire.com/?njiycdz4htw = တီထွင်မှုမှော်ဝိဇ္ဇာကြီးအယ်လ်ဗာအယ်ဒီဆင်
http://www.mediafire.com/?cigqtwgskzx = တီထွင်မှုများ
http://www.mediafire.com/?wymogtik4cu = သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ
http://www.mediafire.com/?kv1qe99nr8id3gb = TWENTY THINGS I LEARNED
ABOUT BROWSER AND INTERNET (အင်္ဂလိပ်)
http://www.mediafire.com/?fflsbgmr77i9rbo = WEB DESIGN HTML AND CSS
http://www.mediafire.com/?jhh7u5ksx3hum5m = AUTOCAD 2005
http://www.mediafire.com/?uv7gv93w69ykx13 = AUTOCAD 2002
http://www.mediafire.com/?udt25jcc8o5f3d2 = MICROSOFT WORD 2002
http://www.mediafire.com/?yzyummzde2m = MICROSOFT EXCEL 2002
http://www.mediafire.com/?yidm0udqzuz = WINDOW INSTALLATION (မြန်မာ)
http://www.mediafire.com/?gzzntmzzcxm = INTRODUCING MAYA 2008 (အင်္ဂလိပ်)
http://www.mediafire.com/?zzydzvnm0dd = MS FRONT PAGE 2002
http://www.mediafire.com/?mj2nzlrzw3v = BASIC WORD PROCESSING (အင်္ဂလိပ်)
http://www.mediafire.com/?niyytyqwwtj = COMPUTER DICTIONARY (အင်္ဂလိပ်)
http://www.mediafire.com/?quhmiu0gomy = LEARNING GUIDE FOR
http://www.mediafire.com/?gzt2tycucb3 = VIDEO CONFERENCING SERVER (မြန်မာ)
http://www.mediafire.com/?d1dkxscgcsz = SMALL OFFICE OR HOME OFFICE
http://www.mediafire.com/?uu0mj6i2dyd6nkf = REMOTE DESKTOP ENVIRONMENT
http://www.mediafire.com/?wgjxwdznend = PROTECTING FROM
http://www.mediafire.com/?cclacsgsywd = NETWORK ADDRESS TRANSLATION
http://www.mediafire.com/?wan1g45myhw = CMS AND DYNAMIC PORTAL ENGINE
http://www.mediafire.com/?wjzrnumnmtg = INTERNET CONNECTION SHARING
http://www.mediafire.com/?nyf3dwiezmz = E-MAIL SERVER
http://www.mediafire.com/?jmzmewt9cm1 = DOMAIN NAME SYSTEM SERVER
http://www.mediafire.com/?gzdzlffuzqz = LEARNING CSS- 2
http://www.mediafire.com/?eoe2jwhniyd = MS POWER POINT 2002
http://www.mediafire.com/?znjmdeh3zkd = LEARNING CSS
http://www.mediafire.com/?myzzm4tjnh4 = HARDWARE AND NETWORK
http://www.mediafire.com/?44ykzzz1m2m = VISUAL BASIC 6.0
http://www.mediafire.com/?jnmgjymmz1u = VB 6.0 TUTORIALS (အင်္ဂလိပ်)
http://www.mediafire.com/?l07778b87waz8os = MICROSOFT ACCESS 2002
http://www.mediafire.com/?d2ikzdwunad = LEARNING HARDWARE IN5MIN
http://www.mediafire.com/?xo9txgs54c2cytf = BUILDING WEBSITES WITH JOOMLA
http://www.mediafire.com/?bb71n4lq41v045t = JOOMLA QUICK START (အင်္ဂလိပ်)
http://www.mediafire.com/?mfmegtmadyx = FrontPage2002 (မြန်မာ)
http://www.myanmarbook.com/ Myanmar Book ..
http://www.myanmarelibrary.com/ Myanmar E library
http://myanmarnetworknews.com/ Online myanmar ebook
http://www.myanmarbookshop.com/ Myanmar Book Shop
http://www.sagarwarmyae.org/ စကားဝါမြေ စာကြည့် တိုက် ..
http://www.manorhary.com/ .:Manorhary:. The popular Author Novelist
and Poet of Myanmar
http://www.bookmyanmar.com/ Myanmar Online Book Store
http://www.myanmardirectory.net/ Myanmar Directory ::
http://www.knowledgewar07.com/ Blog,Computer,Books,Software တွေကိုအဓိက
http://existencemgz.wordpress.com/ ဖွဲ့တည်ရာ မဂ္ဂဇင်း အကောင်းဆုံး
http://www.dhammaransi.net/ Dhamma Ransi - Gateway to Theravada Buddhism
http://www.perfectmagazineonline.com/ home.php Perfect Magazine Online
http://www.myawady.net/ Myanma Reference, tradition culture books :
literature resources ...
http://www.aimwell.org/ Association for Insight Meditation
http://www.yawainwe.net/ Ya Wai Nwe
http://www.kayinstate.com/ Myanmar Book(KayinState)
http://www.shwehinthar.com/ Dhamma E-book in maynmar and english
http://ezine.mywebdigest.net/mwd/ My WebDigest
http://www.yellowpagesmyanmar.net/ Myanmar Yellow Pages, Myanmar
Exporters, Importers, Manufacturers ...
http://ebooks.mmblogs.net/ မြန်မာအီးဘွတ်များကို တစ်စုတစ်စည်း
တစ်နေရာထဲမှာ ဒေါင်းလုပ် လုပ်နိုင်ရန်
http://www.myanmaryellowpages.biz/ Myanmar Yellow Pages - Myanmar
Business Directory, Myanmar Telephone ...
http://www.shwesagar.com/ Shwe Sagar
http://weenyinthit.iblogger.org/ ၀ိညာဉ်သစ်စာအုပ်စင် နဲ့
http://shweone.wordpress.com/ Shwe One
http://www.cherrythitsar.org/ Cherry Thitsar
http://www.mmopenlibrary.com/ MMopenlibrary(Myanmar Book)
http://www.dhammaknowledge.com တရားစာအုပ်များ ..
http://www.myautoosayadaw.com/ အရှင်ဝါယာမိန္ဒ တရားတော်များ
Posted by မျိုးမြင့်အောင် at 11:13 PM No comments: